बच्चाहरुको कार्टुन हेर्ने बानी यसरी हटाउनुहोस् बच्चाहरुको कार्टुन हेर्ने बानी यसरी हटाउनुहोस्
बच्चाहरुको कार्टुन हेर्ने बानी यसरी हटाउनुहोस्
00Wednesday, March 15, 2017
छोराछोरीमा कार्टुनको लत अहिले धेरै अभिभावकको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । कार्टुन हेर्न लागेपछि पूरै दिन बिताउन समेत तयार हुने आफ्नो बच्चाका कारण तपाईं दिक्क हुनुभएको होला ।
छोराछोरीमा कार्टुनको लत अहिले धेरै अभिभावकको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । कार्टुन हेर्न लागेपछि पूरै दिन बिताउन समेत तयार हुने आफ्नो बच्चाका कारण तपाईं दिक्क हुनुभएको होला । बिहान उठ्नासाथ र राति सुत्नुअघि पनि कार्टुन नै हेर्ने बानी धेरै बच्चामा हुन्छ । अरु त अरु, स्कूलको होमवर्क गर्ने बेलामा पनि कतिपय बालबालिका टीभी खोलेर बस्ने गर्छन् ।
छोराछोरीमा कार्टुनको लत अहिले धेरै अभिभावकको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । हरखबत कार्टुनमा झुम्मिने बानीले अधिकांश बालबालिकाको शारीरिक गतिविधि निस्क्रिय छ । कार्टुनले बच्चालाई काल्पनिक दुनियाँमा डोर्‍याउँछ । यसले एकातिर उनीहरुमा स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँदै छ भने अर्कोतिर पठनपाठनमा आवश्यक ध्यान पुग्न सकेको छैन । एकोहोरो कार्टुन हेर्ने प्रवृत्तिले बच्चाहरुको स्वभाव आक्रामक बनाउँदै गएको छ ।
कार्टुनको प्रभाव के हुन्छ ?
कार्टुनले बच्चालाई काल्पनिक दुनियाँमा डोर्‍याउँछ । टिभीमा देखिने कुरालाई नै वास्तविक ठानेर उनीहरु त्यसैलाई अनुसरण गर्ने प्रयास गर्छन् । उनीहरु कार्टुनकै हाउभाउ नक्कल गर्छन् र त्यस्तै भाषा बोल्छन् । कार्टुनले बच्चाहरुमा मुख्यगरी निम्न असर पारिरहेको छः त्यसैले अहिलेका बच्चाहरु वास्तविक जीवनमा रमाउन सकिरहेका छैनन् ।
त्यसो त कार्टुनको बेफाइदा मात्र छैन । अहिलेको डिजिटल युगमा बच्चाहरुले कार्टुनबाट धेरै कुरा सिकिरहेका पनि हुन्छन् । ज्ञान-विज्ञानका विषयमा बनाइएका कतिपय कार्टुनबाट राम्रा कुरा सिक्नुका साथै उनीहरुले नयाँ प्राविधिक ज्ञान पाउँछन् ।
तर, कार्टुनले आजका बालबालिकामा नकारात्मक असर बढी पारिरहेको छ । बच्चाहरु दिनभर कार्टुन हेर्दाहेर्दै आफैं कार्टुनका पात्र जस्तै बन्छन् । उनीहरु कार्टुनकै हाउभाउ नक्कल गर्छन् र त्यस्तै भाषा बोल्छन् । कार्टुनले बच्चाहरुमा मुख्यगरी निम्न असर पारिरहेको छः
अनौठो हर्कत गर्ने– कार्टुनको लतमा परेका बच्चाहरु कार्टुनको पात्र जस्तै बन्ने अभ्यास गर्दै अनौठो हर्कत गर्न थाल्छन् । अक्सर कार्टुनमा देखाइने हिंस्रक दृश्यले बच्चाको कोमल मनमा हिंस्रक प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ । उनीहरु कार्टुनमा जस्तै मारपिट र हिंसा गर्न रुचाउने हुँदै जान्छन् ।
भाषा परिवर्तन– अहिले नेपाली बच्चाहरु मुख्यगरी हिन्दी कार्टुन हेर्छन् । फलस्वरुप उनीहरु देखासिकी गर्दै हिन्दी भाषा बोल्न अभ्यस्त हुँदै गएका छन् । कति कुरा त उनीहरुले नेपाली शब्दको साटो हिन्दीमा भनेको मात्र बुझ्छन् ।
आक्रामक र जिद्दीपन– कार्टुनमा बढी लिप्त हुने बच्चाहरु आक्रामक र जिद्दी स्वभावको हुने गरेका छन् ।
मोटोपन– एकै स्थानमा बसेर कार्टुन हेर्दा शारीरिक गतिविधि शून्य हुँदै जाँदा बच्चाको स्वास्थ्यमा पनि असर पुग्छ । कार्टुनसागै आउने जंकफुडको विज्ञापनले पनि त्यस्तो खानपानप्रति उनीहरुको मोह बढ्न थाल्छ । त्यसबाट उनीहरुमा मोटोपनसँगै अन्य रोगको खतरा पनि हुन्छ ।
यसरी लाग्छ कार्टुनको लत
कामकाजी अभिभावक – आजको समयमा आमाबुवा दुवै कामकाजी हुने गरेकाले उनीहरुसाग बच्चालाई दिनुपर्ने समय हुँदैन । आमाबुवा आफूसँग नखेल्ने गरेपछि बच्चाहरु आफूलाई कार्टुनमा भुलाउन थाल्छन् । धेरैजसो अभिभावकले आफू निश्फ्रिक्री काममा लाग्न पाइयोस् भनेर बच्चाहरुलाई टीभी अगाडि छाडिदिने गर्छन् ।
बच्चाको एक्लोपन – कतिपय अभिभावक फुर्सदको समय हुँदा पनि बच्चासँग खेल्न, कुरा गर्न रुचाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा बच्चाहरु एक्लो महसुस गर्छन् र कार्टुनको शरणमा पुग्छन् ।
खेल्ने माध्यम र ठाउँ नहुनु– बच्चाहरुले कोठा बाहिर शारीरिक खेल खेल्न खोजे पनि खासगरी शहरी भेगमा खुला ठाउँ पाइँदैन । त्यसले गर्दा बच्चाहरु कोठाभित्रै सीमित भएर कार्टुनबाट मनोरञ्जन लिन बाध्य हुन्छन् ।
एकल परिवार– अचेल संयुक्त परिवारको प्रचलन हराउँदै गएर एकल परिवारमा रमाउने क्रम बढेको छ । तर, एकल परिवारमा सीमित सदस्यहरु हुने भएकाले बच्चाले खेल्ने र अलमलिने पर्याप्त विकल्प पाउँदैन । खेल्ने दाजुभाइ-दिदीबहिनी र साथीहरुको अभाव मेट्न बच्चाहरु कार्टुनको लतमा बाँधिँदै जान्छन् ।
कार्टुनको लत कसरी छुटाउने ?
बच्चालाई समय दिनुस् – बच्चामा कार्टुनको लत बढ्नुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार अभिभावक नै हुन्, जो बच्चासाग घुलमिल हुँदैनन् । बच्चासँग कुराकानी गर्ने, विभिन्न खेल खेल्दै मनोरञ्जन गर्ने गरेमा उनीहरुको ध्यान टिभीमा जाँदैन ।
बच्चालाई बोझ नठानौं– कति अभिभावक बच्चाको कुरा सुन्न, उनीहरुसँग खेल्न झर्को मान्छन् । त्यसैले बच्चाबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउन उनीहरुलाई कार्टुन देखाइदिन्छन् । यस किसिमको खराब बानीले पनि बच्चामा कार्टुनको लत लाग्छ । त्यसैले बच्चाको कुरामा चाख दिएमा उनीहरु कार्टुनको मोहमा फस्दैनन् ।
समय निर्धारण गरौं– बच्चालाई कार्टुन हेर्नै बन्देज लगाउने होइन । बरु यसका लागि समय निर्धारण गरिदिनुपर्छ । कतिबेला पढ्ने, कतिबेला खेल्ने र कतिबेला टीभी हेर्ने भनेर उनीहरुलाई व्यवस्थित नियम बनाइदिनुपर्छ । टीभी देखाउादा कार्टुनका साथै अन्य जानकारीमूलक र मनोरञ्जनात्मक च्यानल पनि हेराउने अभ्यास गर्नुपर्छ ।
राम्रो र नराम्रो कुराबारे स्पष्ट पारिदिनुस्– कस्तो कार्टुन हेर्न हुन्छ र कस्तो हुँदैन भन्ने कुरा बच्चालाई सिकाउनुपर्छ । धेरै हिंसात्मक दृश्य भएको, लडाइँ-झगडा भएको कार्टुन हेर्न दिनु हुन्न ।
बच्चामाथि निगरानी राखौं– कार्टुन हेरिरहेको समयमा बच्चालाई त्यसै छाड्नु हुन्न । उनीहरुले के हेर्दै छन्, के गर्दै छन् भन्ने कुरामा निगरानी राख्नुपर्छ ।
आउटडोर गेममा प्रेरित गरौं– दिनभर टिभी हेराउनुभन्दा बच्चालाई बाहिर घुमाउन लानुपर्छ । घर नजिकै खुला चउर छ भने झन् राम्रो । बाहिर खुला ठाउँमा उनीहरुसँगै शारीरिक व्यायाम हुने खालका खेल खेल्नुपर्छ । आउटडोर गेममा प्रेरित गरेपछि बिस्तारै कार्टुनको लत छुट्दै जान्छ ।
Lumbini Media - Nepali News and Entertainment Portal, Daily Nepali News Updates From Lumbini, Nepal: बच्चाहरुको कार्टुन हेर्ने बानी यसरी हटाउनुहोस्